Momba anay - Quanzhou Pingtai Engineering Machine Co., Ltd.
Quanzhou Pingtai Engineering Machine Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1987, Taorian'ny 20 taona mahery ny fampandrosoana sy ny fanavaozana .Pingtai dia lasa mpitarika Shina sy mpanamboatra malaza eran-tany.Izy io dia orinasa maoderina manampahaizana manokana amin'ny fampidirana ny milina fananganana sy ny famokarana kojakoja fitaovana ary ny fivarotana tambajotra.
Ny orinasa Pingtai dia manohana ny "fahamarinana mifototra amin'ny kalitao ho fototry ny foto-kevitra fototra, miaraka amin'ny vokatra maro isan-karazany, ny vidiny mirary, ny fiantohana ny fotoana fanaterana amin'ny serivisy aorian'ny serivisy.Ny vokatra dia aondrana manerana an'izao tontolo izao, ny fifanandrifian-javatra sy ny tombontsoa iraisan'ny tsirairay, ny fampandrosoana ny fandresena, miaraka mba hamoronana fiaraha-miasa tsara ary hanana hoavy tsara kokoa.
Ny orinasa Pingtai dia manana fitantanana maoderina sy ekipa ara-teknika ambony, fitantanana tonga lafatra, fitaovana mandroso, teknolojia kilasy voalohany, fiahiana feno. -Fe-potoana fiaraha-miasa tsara.Ny kalitaon'ny vokatra dia nahatratra ny haavon'ny fandrosoana iraisam-pirenena.
Ny marika "PTZM" dia azo ampiharina amin'ny Komatsu, Caterpillar, Volvo, Hitachi, Hyundai, Kato ary ny milina fanorenana malaza eran-tany.Ny fenitra ara-teknika, ny famokarana ary ny fisafoana ny vokatra dia mampiasa fomba fitantanana japoney, ary ny kalitao dia mahatratra ny fenitra OEM. Ny vokatra dia aondrana any Azia Atsimoatsinanana, Japon, Korea, Eoropa, Afovoany Atsinanana, Amerika ary firenena hafa.
Ny fitaovana mpanamboatra dia mampiasa milina CNC avo lenta
Ny injeniera anay dia manana traikefa azo ampiharina nandritra ny taona maro ary namolavola vokatra vaovao maro ho an'ny mpanjifa. Ny teknolojia dia ekena ary malaza tsara amin'ny mpanjifa. Manana fahaiza-manao fikarohana sy fampandrosoana an-trano izahay amin'ny alàlan'ny fiara, ary koa ny haavon'ny indostrian'ny forging, hafanana. fitsaboana, machining, fitsapana ara-batana sy simika, fahaiza-manara-maso kalitao. Hatramin'ny nanombohana, ny fahaizana mifaninana PINGTAI dia heverina ho teknolojia foana.
Ny akora dia tena boribory vy forging sy mazava tsara fanariana ary azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
Ny orinasa dia manana ekipa fitiliana matihanina, vokatra amin'ny alàlan'ny fitiliana vokatra semi-vita sy fitiliana vokatra vita.
OEM & ODM azo ekena
Misy habe sy endrika namboarina.Tongasoa eto amin'ny fizarana ny hevitrao aminay, andao hiara-hiasa amin'ny famoronana kokoa ny fiainana.
Ny kojakojan'ny siny excavator, Mitondra Track Roller, High Strength Bolt, Exkavator Undercarriage Wear, Rollers Track fingotra, Excavator bucket fanapahana sisiny,